scheduleमगलवार फाल्गुन १३ गते, २०७६
काठमाडाैं, ४ माघ । पाँचौ संस्करणको आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसीपको महिलातर्फ एपिएफले विजयी शुरुआत गरेको छ । एपिएफले आज भएको खेलमा जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई ३–० सेटमा पराजित गरेको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्ड हलमा एपिएफले जावलाखेललाई २५–४, २५–८ र २५–८ अङ्कले हरायो । अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले भरतपुर मेट्रो खेलकूद परिषद्लाई ३–० सेटले हरायो । यस्तै अर्को खेलमा आर्मीले भरतपुरलाई २५–८, २५–२० र २५–१० अङ्कले पराजित गरेको हो ।
विजेताले दुई लाख, उपविजेताले रु एक लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट महिला तथा पुरुष खेलाडीले जनही २५ हजार, उत्कृष्ट लिब्रो, सर्भर, ब्लकर, लिफ्टर, स्पाइकर र प्रशिक्षकलाई जनही १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।रासस
सहिद स्मारक बी डिभिजन लिग : सातदोबाटोको विजयी सुरुवात
एसिया-११ मा समेटिए सन्दीप लामिछाने
प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान तनावमा
म्यानेचस्टर सिटीले बनाएको रेकर्ड लिभरपुलले पनि बनायो
च्याम्पियन्स लिगः आज राति दुई विशेष खेल हुँदै
लिभरपुलको कठिन जित
आइसीसी महिला टी २० विश्वकप : अष्ट्रेलिया ५ विकेटले विजयी
जब नेयमारले रातो कार्ड पाए
कोरोना भाइरसका कारण इटालियन लिग सिरी ए का चार खेल स्थगित
एट्लेटिको मड्रिड लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लियो
रोमाञ्चक खेलमा आर्सनल विजयी
प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको सहज जित
खप्तड गोल्डकप : नव जन जागृति र मदन भण्डारी स्पोर्टस् भिड्दै
आहा ! रारा गोल्डकपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि
शताक्षी गोल्डकप : उपाधिका लागि मच्छिन्द्र र थ्रीस्टार भिड्ने
ब्रेसिया चुक्दा नेपोलीको पुनरागमन जित
काठमाडौँ, १३ फाल्गुन । लगातार रियल मड्रिडलाई तीनपटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान यतिबेला तनावमा...
काठमाडौँ, १३ फाल्गुन । आज राति च्याम्पियन्स लिगमा दुई विशेष खेलहरु हुँदैछन् । पहिलो खेलमा चेल्सीले बार्यन म्युनिखसँग आमने...
कोरोना भाइरसका कारण चीनमा २५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौँ, १३ फाल्गुन । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास झन् फैलिएको छ । पछिल्लो एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना भाइरसका कारण चीनमा ...
काठमाडौं, १३ फागुन । बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने मुजिब १०० टि२० कप बंगलादेश २०२० अन्तर्गत विश्व-११ र एसिया-११ बीच...
माैसममा कहिलेदेखि आउँछ पूर्ण सुधार ?
काठमाडाैं, १३ फागुन । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभाव अझै दुई–तीन पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिमी...
‘के गर्ने बर्बाद भयो, झन्डै ७५ प्रतिशत बुकिङ रद्द भयो’
काठमाडौँ, १३ फाल्गुन । ‘के गर्ने बरबाद भयो’ झन्डै ७५ प्रतिशत बुकिङ रद्द भयो, राजधानी ठमेल नजिकै ज्याठास्थित होटल मनास्लुका...
काठमाडौँ, १३ फाल्गुन । लिभरपुलले यस सिजन उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । गएराति भएको खेलमा लिभरपुलले जित हात पार्दै...
कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरा एकादेशको कथा भयो
हिजो एउटा युग थियो । कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनथ्यो । कम्युनिज्मसँग जोडेर मार्क्सको...